Ufanele Ukufuna Nini Ukwelashwa Kwe-Asthma Ephuthumayo - i-GAAPP
Ukwelashwa Kwe-asthma Ephuthumayo
Ikhaya>Ukwelashwa Kwe-asthma Ephuthumayo
Ukwelashwa Kwe-asthma EphuthumayoIpulatifomu Yesiguli Yomhlaba Wonke Nesifo Somoya2021-03-24T12:21:23+01:00
Ukuhlaselwa yisifuba somoya kuyingozi futhi kungaba yisimo esisongela impilo, ngakho-ke kubalulekile ukuthi wazi izimpawu ezinzima futhi wazi ukwelashwa okuphuthumayo kwe-Asthma.
A ucwaningo lwamuva kutholakale ukuthi eNgilandi naseWales, ukufa kwabantu ngenxa yesifuba somoya kukhuphuke ngama-33% kule minyaka eyishumi edlule, kwathi abantu abadala nezingane abangaphezu kuka-1,400 XNUMX ngonyaka bafa ngenxa yokuhlaselwa yisifuba somoya.
E-US, izibalo ezivela ku- Isikhungo Sikazwelonke Sezibalo Zempilo kwembula ukuthi kwaba nokufa kwabantu abangu-3,564 1.1 ababulawa yisifuba somoya ngonyaka, okulingana nokufa kwabantu abayi-100,000 kubantu abayi-1.6. Kubuye kwaba nokuvakashelwa kweminyango yezimo eziphuthumayo okungu-XNUMXm ngonyaka ngenxa yesifo somoya. Ungafunda eyethu ingozi yokufa kwesifuba somoya umhlahlandlela wokuqonda kabanzi.
Qhubeka ufunde leli khasi ukuthola ukuthi ziziveza kangakanani izimpawu ze-asthma nokuthi yiziphi izinyathelo okufanele uzithathe esimweni esiphuthumayo.
Uzoya nini ku-A & E noma i-ER yesifo somoya
Uma izimpawu zakho ezijwayelekile zesifuba somoya ziye zaba zimbi, mhlawumbe ngenxa yokutheleleka esifubeni, noma uhlaselwa yisifuba somoya, ukuthola ukwelashwa kwe-Asthma okuphuthumayo kungasindisa impilo yakho.
Izimpawu zesifuba somoya ezinzima zifaka:
Izimpawu zokuxwayisa ukuthi udinga ukuya esibhedlela nesifo somoya zihlanganisa:
Ukuphefumula ngokweqile, lapho ungakwazi ukuphefumulela ngaphakathi noma ngaphandle ngokuphelele
Ukuthuthukisa umbala ohlaza okwesibhakabhaka ebusweni bakho, izindebe noma izinzipho
Ukungatholi sizo ekusebenziseni i-reliever inhaler yakho.
Uma lezi zimpawu zenzeka, unganqikazi - iya esibhedlela egumbini lezimo eziphuthumayo ze-asthma noma ufune usizo oluphuthumayo ngokushesha.
Ngabe uphethwe yisifo somoya?
Esimeni esiphuthumayo, udinga ukuthatha isinyathelo ngokushesha. Nalu uhlu lwezinombolo zokuxhumana eziphuthumayo emhlabeni jikelele:
E-UK, shayela u-999.
E-US, shayela u-911.
ECanada, shayela u-911.
E-Australia, shayela u-000.
EFrance, shayela u-15.
EJalimane, shayela u-112.
ESpain, shayela u-112.
ENew Zealand, shayela u-111.
ENingizimu Afrika, shayela u-10 177.
Qaphela ukuthi u-112 usebenza kunoma yiliphi izwe le-European Union nase-UK.
Ungathola uhlu olubanzi lwezinombolo zokuxhumana eziphuthumayo emhlabeni wonke lapha.
Yini okufanele uhambe nayo uma uya esibhedlela unesifo somoya?
Uma usekhaya lapho unesimo esiphuthumayo se-asthma futhi udinga ukuya esibhedlela, kungasiza kakhulu uma ungathatha izinto ezimbalwa uhambe nazo. Lokhu kufaka phakathi:
I-asthma inhalers yakho
Isikhala sakho, uma usebenzisa esisodwa
Noma imiphi eminye imishanguzo oyiphuzayo njengamanje, yesifuba somoya nezinye izimo
Ikhophi yohlelo lwakho lwesenzo se-asthma - lokhu kuzosiza abezokwelapha ukuthi babone okubangela i-asthma, ukugeleza kwakho okuphezulu nokunye okufanele
Ukuhamba nalezi zinto kuzosiza abelaphi ukuthi bakwelaphe. Kodwa-ke, azibalulekile, ngakho-ke ungakhathazeki uma ungakwazi ukuhamba nazo.
Siphatha kanjani isifuba somoya esimweni esiphuthumayo?
Uma uya esibhedlela une-asthma, kungenzeka ukuthi udlule ezigabeni eziningana zokuhlola nokwelashwa.
1. Ukubhaliswa ku-A & E noma ku-ER
Lapho ufika okokuqala e-A & E noma egumbini lezimo eziphuthumayo esibhedlela, kuzofanele ubhalise imininingwane yakho futhi ubazise ukuthi kungani ulapho. Uma ulethwe ngabezimo eziphuthumayo kwi-ambulensi, bazokwenzela lokhu.
Ngemuva kwalokho uzoqondiswa endaweni ukuze ulinde ukuhlolwa kwangaphambi kokutholwa.
2. Ukuhlola kwangaphambi kokuhlola
Uchwepheshe wezokwelapha, ofana nodokotela noma umhlengikazi oyingcweti, uzokubona ukuze uhlolwe kuqala. Uzobuzwa ngokuningiliziwe mayelana nezimpawu zakho, ukuthi zenzeke nini nokuthi zihlala isikhathi esingakanani.
Uma unekhophi yohlelo lwakho lokusebenza lwesifuba somoya nawe nemininingwane ye imithi kanye nokwelashwa uthatha, lesi yisikhathi sokubanikeza.
Inqubo ye-triage isiza ochwepheshe bezokwelapha ukuthi bahlole ubunzima besimo, ukuthi udinga ukubonakala masinyane kangakanani nokuthi yiziphi izindlela zokwelashwa ongazidinga ngokuphuthumayo kwesifuba somoya.
Lapho ukuhlolwa kwangaphambilini sekuqediwe, kungadingeka ukuthi ulinde isikhashana ukubona omunye udokotela, noma bangaqhubeka ngokushesha ngokwelashwa okuphuthumayo.
3. Ukwelashwa kwe-Asthma Ephuthumayo ku-A & E
Ukwelashwa kwe-asthma ezibhedlela kuklanyelwe ukuhlangabezana nezidingo nezidingo zakho ngazinye. Ukwelashwa okuqondile ozoba nakho kuzoya ngezimpawu zakho nokuthi uhlolwe kanjani.
Uma uphethwe yisifuba somoya, kungenzeka unikezwe imaski yomoya-mpilo, i-nebuliser ne-steroids ukuzama ukwehlisa ukuhlasela. Izidakamizwa zeBronchodilator zizonikezwa nge-nebuliser ukusiza ukuvula imigwaqo yakho yomoya. I-nebuliser iguqula umuthi ube isifutho esihle, ukuze ukwazi ukuwuphefumula ngemaski. Kuyindlela ephumelelayo yokuletha umthamo wemithi oyidingayo.
Ama-steroid anganikezwa njengamathebulethi noma ngendlela ewuketshezi, noma ungahle ubeke i-canula ngemuva kwesandla sakho ukuze ama-steroids ajovwe ngqo emthanjeni. I-steroids izosiza ukunciphisa ukuvuvukala emaphashini akho nasemigwaqweni yomoya.
4. Ukuhlola ukwelashwa ukusebenza
Kungenziwa izivivinyo ezahlukahlukene ukuze kuhlolwe ukuthi i-asthma yakho isabela kanjani ekwelashweni okunikezwayo. Isibonelo, amazinga akho e-oksijeni egazi azolinganiswa ngedivayisi ebekwe emunweni, noma ungahle ube nokuhlolwa kokugeleza okuphezulu ukukala ukuthi ukwazi ukuphuma ngokushesha kangakanani.
Ungadinga ukuthi ube nokuhlolwa okuningi, okufana nalokhu:
ama-x-ray noma ama-scan, enziwa ukuthola isithombe esigcwele ngokwenzekayo ngamaphaphu akho kanye nemigwaqo yomoya
ukuhlolwa kwe-spirometry, ukukala ukuthi ungakanani umoya ongaphefumula ngawo ngomzuzwana owodwa.
Uzoqhubeka nokuthola ukwelashwa futhi ubhekwe kuze kube yilapho izimpawu zakho zokuhlaselwa yisifuba somoya zincipha. Ngokuya ngokuthi unjani, ungakwazi ukuthunyelwa ekhaya ngokuhamba kosuku olufanayo noma ungagcinelwa ezinye izivivinyo nokwelashwa.
Uyisa nini ingane yakho ku-ER?
Kungakhathaza futhi kukhathazeke ukubona ingane yakho ilwa kanzima nokuphefumula ngenxa yesifuba somoya.
Izimpawu ezisemqoka ukuthi udinga ukuthatha ingane yakho ziyise e-ER noma ushayele i-ambulensi zifaka:
Bakhwehlela futhi baphefumule kakhulu
Bakhala ngokuthi isifuba sabo sibuhlungu noma sizizwa siqinile; ezinye izingane zingase zithi isisu sazo sibuhlungu
Abatholi mpumuzo ku-reliever inhaler yabo (eluhlaza okwesibhakabhaka)
Abakwazi ukuhamba noma ukukhuluma kalula.
Zama ukugcina ingane yakho izole ngangokunokwenzeka futhi uyihlalise - ukulala phansi kuzokwenza izinto zibe zimbi kakhulu. Uma ulinde i-ambulensi ukuthi ikuyise esibhedlela, thola ingane yakho ukuthi isebenzise i-reliever inhaler yayo (evame ukuba luhlaza okwesibhakabhaka) nge-spacer sayo. Thatha ukukhipha okukodwa njalo ngemizuzwana engama-30 kuye kwangama-60, kuze kufike ekukhulekeni okuphelele okuyi-10.
Yini okufanele ngiyenze ngemuva kokwelashwa okuphuthumayo kwe-Asthma?
Uma uphuma esibhedlela noma egumbini lezimo eziphuthumayo, kufanele unikezwe imininingwane yokuthi imiphi imithi okudingeka ube nayo. Uzotshelwa nangezinye izinyathelo okudingeka uzithathe ukuze uzinakekele ezinsukwini ezimbalwa ezizayo.
Ngemuva kokuthi uthole ukwelashwa kwe-asthma okuphuthumayo kwe-asthma yakho, kufanele wenze i-aphoyintimenti ephuthumayo nodokotela wakho noma umhlengikazi we-asthma, ngokufanele kungakapheli izinsuku ezimbili. Lokhu kufaka phakathi ukuthi uyiswe esibhedlela noma welashwa ngabosizo lokuqala. Kubalulekile ukugcina abahlinzeki bakho bokunakekela okuyisisekelo benolwazi ngezimpawu zakho ze-asthma kanye nesimo esiphuthumayo se-asthma futhi uqinisekise ukuthi banerekhodi lokuhlaselwa yi-asthma.
Lapho uhlaselwe yisifuba somoya esidinga ukwelashwa esibhedlela, ingozi yakho yokuthi lokhu kwenzeke futhi iphezulu. Ngakho-ke kubalulekile ukuxoxa ngezindlela ezingokoqobo onganciphisa ngazo ubungozi bokuhlaselwa ngokuzayo. Ngisho nento elula njengokushintsha inqubo oyisebenzisayo ukuthatha ama-inhalers akho kungasiza ekunciphiseni ubungozi bokuhlaselwa okulandelayo.
Udokotela wakho noma umhlengikazi wesifuba somoya uzobuyekeza yonke imithi oyiphuzayo njengamanje bese ebheka uhlelo lwakho lwesenzo se-asthma. Uma kudingeka, bazokweluleka nganoma yiluphi ushintsho noma ukuzivumelanisa nezimo okudingayo ukuze uqinisekise ukuthi i-asthma yakho ilawulwa ngokuphelele. Bangathatha isinqumo sokukunikeza inkambo emfushane yamathebulethi omlomo we-steroid, njengePrednisolone, uma isibhedlela singekho. Ama-steroid angasiza ukunciphisa ukuvuvukala ezindleleni zakho zomoya ngemuva kokuhlaselwa yisifuba somoya. Kubalulekile ukuxoxa nodokotela wakho ngemiphumela emibi ye-prednisolone.
Ngokuhamba kwesikhathi, kubalulekile ukuthi ube nokubuyekezwa kwesifuba somoya njalo nomhlengikazi noma nodokotela. Okufanelekile, lokhu kufanele kube okungenani kanye ngonyaka. Khumbula ukuthatha i-asthma inhalers yakho kanye nemithi njengoba unqunyiwe bese uzama ukugwema noma yiziphi izimbangela zesifuba somoya ngoba konke lokhu kuzosiza ekulawuleni i-asthma.